Midwest Climate & Energy - McKnight Foundation
Sebtember 2019, McKnight ku dhawaaqay fidin barnaamijka iyo hadafkan cusub: Tallaabo geesinimo leh ka qaado dhibaatada cimilada adoo si aad ah u gooya wasakheynta kaarboon-ga Karbaashka ee bartamaha-galbeed sannadka 2030. McKnight wuxuu ku dhawaaqi doonaa tilmaamaha barnaamijka dib loo eegay dayrta 2020.
Ilaa tilmaamaha cusubi ka soo baxayaan, waxaan sii wadaynaa caawimaadda hoos timaada tilmaamahayaga hadda jira. Xusuusin inaan isticmaalno nidaamka arji xiran.
Goolka Barnaamijka: Kobcinta iyo taageeridda hoggaaminta cimilada iyo tamarta ee gobollada Dhexe, taas oo ka dhigaysa gobolka tusaale model caalami ah iyadoo la yareeynayo gaaska dabaysha korontada ku xiran.
Barnaamijka "Climate & Climate Midwest" ayaa u muuqda mid dhaqaale, dhexdhexaad ah oo dhexdhexaad ah oo dhexdhexaad ah, kaas oo bedelaya nidaamka tamarta.
Shaqada McKnight waxay ku lug leedahay hoggaamiyeyaasha gobolka iyo kuwa gaarka loo leeyahay, go'aamiyayaal, iyo dadka degan dhisida beelaha hoose iyo kuwa dhaqaalahoodu hooseeyo, kuwaas oo ah kuwo firfircoon, u siman, iyo karti leh. Waxaannu daba galnaa hadafyadaas iyada oo loo marayo deeqaha, maalgelinta, shirarka, iyo ka qayb qaadashada bulshada.
Fadlan ogow: Barnaamijka wuxuu isticmaalaa nidaamka codsiga oo xiran. Soo jeedinta maalgelinta waxaa laga aqbalaa oo kaliya ururada lagu martiqaado inay codsadaan.
2019 Grantmaking at GlanceEeg Deeqaha dhow
Cimilada Cimilada & Tamarta Warbaahinta, Fikradaha, iyo Khayraadka
Maxay tahay sababta aan ugu baahanahay inaan dhexdhexaadka sinaanta ka dhigno Dhaqdhaqaaqa Cimilada
By Aimee Witteman Luulyo 2020
Nadiifinta Shaqooyinka Midwest
Warbixinta, Khayraadka Webka Juun 2020
Agaasimaha Barnaamijka Cimilada & Tamarta ee Midwest Aimee Witteman ayaa Ku Dhaceysa Inay Talo Bixiso Koorso Cusub
Sarah “Sam” Marquardt